Farmaajo oo Saxiixay Sharciga la dagaallanka Musuq-maasuqa – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Farmaajo oo Saxiixay Sharciga la dagaallanka Musuq-maasuqa
Farmaajo oo Saxiixay Sharciga la dagaallanka Musuq-maasuqa
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa saxiixay sharciga dhismaha guddiga madaxa banaan ee la dagaalanka musuq-maasuqa, ka dib xaflad lagu qabtay xarunta madaxtooyadda Soomaaliya waxaana sharcigaan uu noqonayaa sharci rasmi ah oo la isticmaalo.
”Madaxweyne Farmaajo ayaa u mahad celiyay cid kasta oo ka qayb qaadatay diyaarinta sharciga dhismaha guddiga madaxa banaan ee la dagaalanka musuq-maasuqa”.
”Musuq-maasuqa kaliya ma ahan lacag la xado waa in qofku masuuliyadda uu hayo si xun ugu takri falo oo si shaqsi ah isagoon ilaahay ka baqeynin isagoon masuuliyadda loo dhiibay tixgalineynin”ayuu yiri Madaxweyne Farmaajo.
Munaasabadda waxaa ka qayb galay masuuliyiin badan oo ay ka mid yihiin wasiiro,xildhibaano,saraakiisha ciidanka, sharci yaqaano,culimada diinta iyo ganacsato sidoo kale ururada bulshada rayidka waxaana aad loo wada bogaadiyay in sharcigaan la helo.
Previous articleBayle “Soomaaliya waxay rajaynaysaa in 2020-ka laga Cafiyo daymaha”
Next articleIran maxay ka dheefaysaa haddii ay weerar ku qaaddo Sucuudiga?
Deg Deg Maraykanka oo hambalyeeyay doorashada Madaxweyne Galmudug